Screw Jack - လျှော့ချစက်များ၊ တီကောင်လျှော့ချစက်များ၊ တီကောင်ဂီယာအုံများ၊ ဂြိုဟ်တုဂီယာအုံများ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊
ပင်မစာမျက်နှာ / Speed ​​Reducer & Gearbox / ဝက်အူဂျက်
၁။ Lift speed: ၁၅၀ မီလီမီတာ / မိနစ်မှ ၁၈၀၀ မီလီမီတာ / မိနစ်
2. Input ပါဝါ: 0.5 -21.8KW
3. ဝက်အူမြည်: 5-16 မီလီမီတာ
4. Bearing အကွာအဝေး: 2T-100T
5. ဖွဲ့စည်းပုံ: မော်တာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှု, တစ်ခုတည်း & နှစ်ဆရိုးတံ
ဂီယာမောင်းနှင်မှု၊ ဂီယာမောင်းနှင်မှု၊ ဂီယာမော်တာ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချခြင်း၊ လိမ်မာကျောသောဂီယာ၊ ကွေးဂီယာ၊ စွယ်ဂီယာ၊ ဂီယာဘောက်စ်၊ တီကောင်ဂီယာ၊ တီကောင် ၀ င်ရိုး၊ ဂီယာမောင်းနှင်မှုများ၊ ဂီယာစက်များ၊ အမြန်နှုန်းလျှော့ချစက်များ၊ လိမ်လှိမ့်ဂီယာများ၊ bevel ဂီယာများ၊ စွယ်ဂီယာများ၊ ဂီယာအုံများ၊ တီကောင်ဂီယာများ၊ တီကောင်ရိုးများ၊ , bevel ဂီယာအုံ